Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Aregawi Berh oo Kamid Ahaa Aas Aaseyaashii Ururka TPLF oo Sheegay In Taliska TPLF Udhamaatay.
Dr. Aregawi Berh oo Kamid Ahaa Aas Aaseyaashii Ururka TPLF oo Sheegay In Taliska TPLF Udhamaatay.
Posted by Daljir	/ September 22, 2015
VOA- Laanta Axaamriga ayaa waxay waraysatay Dr. Aregawi Berh oo kamid ahaa aas aasa yaashii ururka TPLF. Dr Aregawi wuxuu ahaan jiray masuul katirsan Gudigga Fulinta isla markaana u qaabilsanaa Hoggaanka dhaqaalaha haddana wuxuu ku noolyahay wadanka Holland.
Waraysigu wuxuu ku saabsanaa goosashada u goosytay hogaamiyahii ururka Tigray People’s Democratic Movement TPDM Mola Asgidom ee ururka Tigrega ee dawlada Itoobiya la dagaalama iyo qorsheyowga ururk TPLF.
Dr. Aregawi wuxuu sheegay in uusan waxba ka badali doonin isdhiibista uu isdhiibay Mola Asgidom xaalada ay kujiraan shacbiga Itoobiya ee dulman, taas oo uu ku tilmaamay shaqsi danayste ah. Waxaase hadda muuqata ineey dawlada Itoobiya borobagaande ahaan u adeegsanaysay taasna waxay socon kartaa mudo dhawr usubuuc ah oo kaliya.
Waxa kaloo uu Dr. Aregawi sheegay in tirada ciidanka ee uu la goostay Mola aysan waxba ka ahayn marka loo eego tirada guud ee ururka TPDM, waxaa intaas dheer in hoggaaminta ururka TPDM oo ahaa 25 xubnood oo golaha dhexe ahi aysan cid kale la soconin.
Dr. Aregawi waxa u sheegay oo kale ineey Itoobiya ku habsatay musuq maasuq baahsan cadaalad daro, cabbudhin, gumaysi & saboolnimo xad dhaaf ah, taasoo keentay ineey dhalinyaradii wadanku si aan caadi ahayn afarta jaho ay u kala qaxaan.
Dr. Aregawi wuxuu intaas kudaray oo uu sheegay maadama ay u dhamaatay hogaaminta ururka TPLF/EPRDF ooy baaba’ qarka u saaran yihiin waxay hadda ku jiraan qorshe ah in dib u soo celiyaan masuliyiintii ururka uga tirsanaan jiray maadama ay aad u wiiqmeen.
Wuxuu intaas raaciyay ineey marar badan ay lasoo xidhiidheen masuliyiinta ururka TPLF ooy ka codsadeen inuu kusoo noqodo ururkaas oo u baahan maanta in la taageero si uu u sii jiro.
EPRDF waxay ku guul daraysatay xal uhelida dhamaanba dhibaatooyin baahsan ee ku habsday wadan Itoobiya taasoo keeni karta bur bur & halaag aan laga soo waaqsan karin.
Waxa uu Dr. Aregawi hadalkiisii ku soo gabagabeeyay in dhamaan ururada mucaardka ah kuwa hubaysan & kuwa aan hubaysnayn loo midoobo sidii xukunka looga tuuri lahaa kooxda kaligood taliye yaasha ah ee TPLF/EPRDF.